सांस्कृतिक सुधार कहिले ?
डा. गाेपाल ठाकुर सोमबार, चैत ४, २०७५ मा प्रकाशित
लेखक -गोपाल ठाकुर
स्वास्थ्यमा समस्या आएदेखि केही महिनादेखि म उपचार र संयमको दृष्टिले संघीय राजधानीमै समय बिताइरहेको छु । यसको बावजूद आफ्नै गृह जिल्ला बारा र प्रदेशमा पार्टीले आयोजन गर्ने कार्यक्रमहरूमा नगई मनै नमान्ने मानसिक रोगबाट पनि पीडित नै छु । भदौ १० मा मैले हृदयाघात झेलें । त्यस दिन र असोज २ गते गरी तीन वटा जाली (stents) मेरो मुटुमा लगाइयो । आधा दर्जन औषधी पनि निरन्तर लिई रहने अवस्थाको दास हुन पुगेको छु । यसले गर्दा गत कात्तिक १७ गते छठ लगायतका पर्वहरूको अवसरमा म स्वयं सदस्य रहेको तथा मेरो समेत संलग्‍नतामा बारा जिल्ला नेकपा कार्यदलले हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय नेता उपप्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर मेरो नाजुक स्वास्थ्य स्थितिको कारण म जान सकिन । त्यस पछि जिल्ला पार्टी कार्यदल वा २ नं. प्रदेश समितिले केही कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्‍यो र अलि ठीक महशुस भएकोले मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएँ ।
कात्तिक ३० गते डुमरवानामा आयोजित औद्योगिक मेलामा पार्टी नेता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएँ । त्यस पछि मंसीर २७ र २८ मा पार्टी नेता सिंचाई, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको दुईदिने पर्सा-बारा-रौतहट भ्रमणका क्रममा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएँ । अनि माघ ११ गते पार्टी नेता कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको प्रमुख आतिथ्यमा परवानीपुरमा भएको अन्तरक्रिया, पार्टी नेता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रमुख आतिथ्यमा माघ १६ गते मुखलाल स्मृति दिवस, पार्टी नेता देवेन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा फागुन १ गते निजगढ़को लालमा भएको महान जनयुद्ध दिवस र भरखरै गत फागुन २५ गते गरुडामा पार्टी अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्य र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष आतिथ्यमा गरुडामा भएको विशाल जनसभामा सहभागी हुने अवसर पाएँ ।
मैले सहभागी हुने अवसर पाएका कार्यक्रमहरूमा निश्चित रूपमा उत्साहित हुने अवसर पाएको हूँ । तर ती अवसरहरूमा भए-गरेका केही क्रियाकलाप नहुँदा अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न मात्रै खोजेको हूँ । डुमरवानामा कात्तिक ३० गते भएको कार्यक्रम उद्योग-वाणिज्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा सामाजिक संस्थाले आयोजना गरेको थियो । तर तयारी पूरा नहुँदै उद्घाटन समारोह भएको अनुभूति भयो । यसरी तयारी नपुग्दाको अवस्थामा उक्त संस्था तथा त्यहाँका अन्य साथीहरूले ध्यान पुर्‍याउँदा राम्रो हुन्थ्यो । मंसीर २७-२८ को सिंचाइ मन्त्रीको तीन-जिले भ्रमणको अन्तिम चरणमा मंसीर २८ गते कटहरियामा भएको जनसभामा केही घटना मलाई गैरमुनासिब लागेकै हुन् ।
त्यस जनसभामा कता-कता पंचायती विकासवादी सतही चरित्रको झझल्को मैले पाएकै हो । विकास नराम्रो कुरो होइन र त्यसैको लागि सम्पूर्ण संघर्षहरू पनि भए-गरेका हुन् । तर जनतालाई अधिकार सम्पन्न नबनाइकन विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण उपयोगको प्रत्याभूति र संविधानले समेट्न नसकेका अधिकारहरूको सन्दर्भमा संविधान संशोधनको सम्भावनाका बारे कुरा गरिनु पर्थ्यो तर गरिएन । यसको बावजूद मैले हदै दर्जाको हास्यास्पद र लज्जास्पद सांस्कृतिक प्रस्तुतिले शिर निहुराएर त्यहाँबाट निस्कने निधो गरेकै हूँ ।
तड़क-भड़क, अर्धनग्‍न पहिरनमा सजिएकी किशोरीहरूको बुर्जुवा गीतमा त्यस्तै कामुक प्रस्तुति त भएकै थियो, सुनील पंडित भन्ने एकजना अश्लील गायकलाई स्वागत गानका लागि उभ्याइएको थियो । उनले ‘वर्षमान पुन जिन्दावाद ! प्रभु साह मेरे जिन्दावाद !!’ उद्घोष भएको गीत प्रस्तुत गरे । यो आफैँमा आपत्तिजनक छ । किनभने यसले सामूहिकताको घाँटी रेट्छ र सामूहिकता बिना व्यक्ति पूजाले न समाज बन्छ न समृद्धि नै सम्भव हुन्छ । तर त्यसभन्दा पनि घटिया चरित्र उनले ती दुबै नेतालाई जति पटक जिन्दावाद भने, त्यति नै पटक पाऊमै ढोगे । त्यसवापत उनले दस हजार नगद पारितोषिक पनि पाए । निश्चित रूपमा घेरा फराकिलो बनाउँदै बाहिर रहेका विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रिटीहरूलाई समेट्नु राम्रो कुरा हो । तर तिनीहरूलाई आफ्नो अनुसार रूपान्तरण गर्ने कि आफैँ रूपान्तरण हुने ? बुझ्न सकिएन ।
मंसीर ११ गतेको कृषि मन्त्रीको भ्रमणमा सिम्रौनगढको माछा सुपरजोन पनि समेटिएको थियो कार्यसूचीमा । तर परवानीपुर पछि सोझै उहाँलाई रौतहट लगियो । यसले गर्दा सिम्रौनगढका माछा किसान तथा पार्टी पंक्ति निकै विक्षिप्त हुन पुगे । यसले गर्दा कार्यक्रम बनाउँदा जति सम्भव छ त्यतिकै ठाउँमा बनाउनु बेस हुनेछ । जहाँसम्म माघ १६ को कुरो छ, म त तयारी बैठकहरूमा अनुपस्थित नै थिएँ तर जिल्लाबाट साथीहरूको
माध्यमले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उक्त दिन प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइएको खबर पाएको थिएँ । तर ११ गते परवानीपुरको कार्यक्रममा आयोजक २ नं. प्रदेश कार्यदलका इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिव जो कसैलाई सोध्दा पनि थाहा छैन भन्ने उत्तर पाएँ । त्यति मात्रै पनि होइन, कार्यक्रमकै दिन पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलको नाम प्रमुख र विशेष अतिथिको रूपमा तुलहरूमा मुद्रण भएको पनि पाएँ । तर यस बारेमा बिहानै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ अध्यक्ष प्रचण्ड आउनु हुन्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आउनु हुन्छ भनेर ।
यसरी बेथितिको प्रचार-प्रसार रोकिएन भने विश्वासको संकट पैदा हुने खतरा बढ्न सक्छ । रह्यो कुरो फागुन २५ गतेको गरुडा आमसभाको, त त्यहाँ व्यवस्थापन बिल्कुल चुस्त-दुरुस्त थियो । सहभागीहरूको उपस्थिति पनि उत्साहजनक नै थियो । हाम्रा नेता त्रयको संबोधन पनि ऊर्जावान नै थियो । तर नमिलेको कुरो त्यहाँ पनि सांस्कृतिक प्रस्तुतिकै देखियो । प्रधानमन्त्रीले बडो ओजका साथ उद्घोष गर्नु भो, ‘कुनै पनि दिदी-बहिनी बोक्सी हुनुहुन्न, त्यसैले कसैलाई यो शब्दले संबोधन नगरौं र यस्ता कुप्रथालाई निस्तेज गरौँ ।’ तर ठीक प्रधानमन्त्रीको ओजस्वी वक्तव्य पछि झिँझिया नृत्य (मैथिली) को प्रस्तुति भयो ‘तोहरे भरोसे बर्‍हम बाबा झिँझिया बनैलियौ हो, झिँझिया पर होखऽ न सहाय’ ।
यति मात्रै होइन, यस नृत्यको अन्तिममा भनियोः चल चल गे डैनी कदम तर, तोरा बेटा के खैबौ बर्‍हम तर यानी ‘ए बोक्सी कदम मुनि हिँड, तेरो छोरोलाई ब्रह्मस्थानमा खान्छु ।’ स्मरण रहोस् यो गीतमा कटहरियामा र आधारशिला, महोत्तरीको कार्यक्रममा पनि नृत्य प्रस्तुत भएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्रीको उद्घोषकै विपरीत, आफ्नो मूल्य-मान्यताकै विपरीत कामकारवाई प्रस्तुत गर्न- गराउनको लागि जिम्मेवार को ? यसले कस्तो समाज बनाउँछ ? खासमा कस्तो मधेश बन्छ ? जस-जसको जति जिम्मेवारी छ यसलाई आत्मसात गरौँ र समयमै कुरामा होइन व्यवहारमा सांस्कृतिक सुधारको दिशामा आवश्यक कदम उठाऔँ ।